Dhageyso: Maleeshiyada Shabaab oo Dib Uga Baxday Degmada Ceelwaaq – idalenews.com
Dhageyso: Maleeshiyada Shabaab oo Dib Uga Baxday Degmada Ceelwaaq
Ceelwaaqo(INO)_ Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa saqdii dhexe ee xalay dib uga baxay Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, ka dib muddo saacado ah oo ay haysteen.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa fiidnimadii xalay dhawr jiho ka soo weeraray Degmadaasi, iyagoo iska caabin kala kulmay Ciidamadii Dowladda ee ku sugnaa, walow Ciidamada Dowladda lagu khasbay in ay isaga baxaan Ceelwaaq.
Maxamed Aw Cumar Guure, Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Ceelwaaq, ayaa sheegay Ciidamada Dowladda in ay si wanaagsan isaga caabiyeen maleeshiyada Shabaab. Taliyaha wuxuu tilmaamay in afar ka mid ah Ciidamada Dowladda ku dhaawacantay dagaalkaasi.
Mintidiinta Al Shabaab, ayaa saqdii dhexe ee xalay laba jiho uga baxay Degmada Ceelwaaq, wado aadda dhinaca Dhamase oo xigta Degmada Beled Xaawo iyo wado kaloo aadda Deegaanka Ceelcadde, oo 60km u jira Magaalada Garbahaarey.
Korneyl Warfaa Sheekh Aadan oo ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Gedo, ayaa sheegay in si kedis ah ay Shabaabku uga baxeen Degmada Ceelwaaq.
Mudadii ay Ururka Al Shabaab haysteen Degmada Ceelwaaq, ayaa waxaan jirin cid ay waxyeelo ugu gaysteen Degmadaasi, marka laga soo taggo nin ka mid ah dadka deegaanka oo hoygiisa ay kala baxeen, inkastoo markii dambe ay dib u soo sii daayeen.
Isgaarsiintii Ceelwaaq, ayaa dib hawada ugu soo laabatay, ka dib markii ay si iskooda ah uga baxeen Degmadaasi maleeshiyada Shabaabka.
Dadka deegaanka, ayaa inoo xaqiijiyay inaanay weli Degmadaasi ku soo laaban Ciidamadii Dowladda ee fiidnimadii xalay lagala wareegay gacan ku haynta Ceelwaaq.
Shabaab, ayaa 16-kii bishii September dagaal culus kula wareegay gacan ku haynta Degmada Ceelwaaq, iyagoona ku dilay Saraakiil uu ka mid ahaa Allaha u naxariistee Korneyl Aadan Maxamed Waceys (Aadan Koronto).
Ugu dambeyntii, Degmada Ceelwaaq, ayaa waxaa ka hawlgala Ciidamada Dowladda Somaliya oo keliya, iyadoo aanay ka hawlgelin Xoogaga Nabad Ilaalinta ee Midowga Afrika.
DEG DEG:Al-shabaab oo dagaal la’aan kula wareegay gacan ku heynta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo
Kursigii ugu dambeeyay Aqalka Hoose ee Galmudug oo lagu doortay Cadaado